Local Media - वर्षासँगै काभ्रेका विकट गाउँ यातायातबाट बञ्चित
वर्षासँगै काभ्रेका विकट गाउँ यातायातबाट बञ्चित
प्रकाशित समय: बिहिवार, ०८ : ०९ बजे असार २६ गते
काभ्रे - जिल्लाको विकट क्षेत्र भनेर चिनिने डाँडापारी क्षेत्र सडक यातायातबाट पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । वर्षाको शुरुवात सँगै ती क्षेत्रका सडकमा क्षति पुगेपछि स्थानीय सडक यातायातबाट बञ्चित भएका हुन ।
सडक बन्द भए सँगै डाडाँपारी २ दिन सम्म पैदललै हिँडेर सदरमुकाम सम्मको यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । दुई गाउँपालिका महाभारत र खानीखोलाको सम्पूर्ण क्षेत्र तथा बेथानचोक गाउँपालिकाको वडा नं १ डाँडापारी क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।
डाँडापारी क्षेत्र प्रवेश गर्नका लागि सिपाली, कामीडाँडा तथा च्याम्राङवेसीबाट मुख्य सडक लगायत आधा दर्जन क्षेत्रबाट सडक निर्माण भएका छन् । त्यस सँगै डाँडापारीबासीले ललितपुर। सिन्धुली, मकवानपुर जिल्लाबाट पनि सडक सुविधा उपयोग गर्दे आएका छन । वर्षाका कारण अहिले ती सबै सडक बन्द भए पछि सडक सुविधाबाट स्थानीय बञ्चित भएका हुन ।
डेढ वर्ष अघि धुलिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले एक भित्र भित्र डाँडापारीका सबै क्षेत्रमा बाह्रै महिना मोटर गुडने बताएका थिए । उनले भनेका थिए–“डाँडापारी क्षेत्रलाई कर्णालीको उपमा दिइन्छ यो गलत हो ।
उक्त क्षेत्रमा के छैन ? मात्र अभाव छ बाह्रै महिना चल्ने सडकको ढुक्क हुनुहोस आजको मितिबाट १ वर्ष भित्रमा डाँडापारी क्षेत्रमा १२ महिना सवारी साधन चल्ने छन ।” तर विभिन्न क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका आधा दर्जन सडकहरु सबै बन्द हुँदा स्थानीय दुखित छन् ।
अघिल्लो वर्षकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका सबै स्थानीय तहमा पुग्ने मूल सडक कालोपत्रे गरिने उल्लेख छ । तर वर्षायामको शूरुवात हुदैमा सबै सडक बन्दहुनु दुखदायी भएको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छामान जिम्बाले बताए । डाँडापारीका गाउँ गाउँमा कच्ची सडक निर्माणले तिव्रता त पायो तर डाँडापारी जाने मुख्य सडकहरुलाई स्तरोन्नती गर्ने तथा दिगोपन दिने कार्यमा सकैले चासो नदिँदा अहिले समस्या सिर्जना भएको डाडापारी क्षेत्रका युवा नेता विद्यासागर लामाले बताए ।
कर्मचारीलाई तलब, शिक्षा स्वास्थ्य, महिला बालबालिका जस्ता क्षेत्र तोकेर उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाको बजेट ले कति नै सडक निर्माण हुन छ र ? केन्द्र प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकम सडक स्तरोन्नतिका लागि मात्र हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार त्यासको परिमाण पनि कम छ । बाटामा धेरै पुलहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाको बजेटले पुल निर्माण सम्भव छैन कसरी चल्छ बाह्रै महिना सडक ? महाभारत गाउँपालिका प्रमुख प्रश्न गर्छन । तहको बजेटले मात्र सडक दिगो बन्न सक्दैन, अहिले जिल्ला सदरमकाम पुग्न २ दिन हिँडनु पर्छ ।
बिरामी लगायतका समस्या पर्दा झनै जटिल हुन्छ ,उनले थपे । हिउँदलाई त विभिन्न सडक प्रयोग गरि सुविधा लिइएको हो तर अहिले त गाउँपालिकाबाट जिल्ला सदरमुकाम सम्म हिँडेर पुग्न पनि धौ–धौ छ खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर खुलालले बताए । सडक निर्माणका क्रममा पुराना गोरेटो बाटो नष्ट भएको र सडक पनि अवरुद्ध भए पछि थप संकट परेको उनको भनाई थियो ।
वर्षा सँगै डाँडापारीक्षेत्र थप विकट बन्ने गरेको उनको भनाई छ । गत वर्षबाट स्तरोन्नति गरिएको खोपासी च्याम्राङबेसी, मिल्ते सडकको ढुर्खक, मिल्चे खण्ड पनि वर्षा सँगै पूर्ण रुपमा बन्द छ । उक्त सडकका विभिन्न स्थानमा ठूला पहिरा गएका छन् । उक्त सडकको केही भाग स्तरोन्नति गरिएको थियो । १० वर्ष अघि नै निर्माण भएको उक्त सडक केही वर्ष अघि देखि १२ महिनै संचालन हुने गरेको थियो ।
पहाडी भूभागको ख्यालै नगरि सडकलाई समानान्तर हुने गरी पुरानो सडक माथि नयाँ सडक निर्माण गरिएको कारण स्थानीय सडक सुविधाबाट बञ्चित हुन परेको स्थानीयको गुनासो छ । उक्त सडक पनि ५ दिन अघि देखि पैदल यात्रा गर्न समेत जोखिम हुने गरि बन्द छ । सडक बन्द हुँदा स्थानीयले दुख पाएका छन् ।
गाउँपालिका डोजर खरिद गर्ने प्रकृयामा छ । सडकलाई बन्द हुन दिँदैनौ बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर तिमल्सिनाले बताए । डाँडापारी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको रुपमा सडक निर्माणकार्य तिब्र छ । तर दिगोपनको ख्याल गरिएको छैन । विभिन्न व्यक्तिका नाम जोडेर समेत सडक निर्माण भइरहेका छन । गुणस्तरको विषयमा ख्याल पुर्याइएको देखिँदैन ।
उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका सडकका लागि राज्यबाट समेत उपेक्षा गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आवश्यक प्राविधिक विषयलाई ख्याल नगरि विना प्राविधिक रेखदेखमा निर्माण गरिएका डाँडापारीका दर्जनौ सडक मौसमी सडकको रुपमा चिनिएका छन ।